Soomaaliya oo mar kale ka mid noqotay dalalka ugu khatarta badan ee loo safro | Saxil News Network
Soomaaliya oo mar kale ka mid noqotay dalalka ugu khatarta badan ee loo safro
Image captionSawir hore
Waddamada Soomaaliya, Liibiya iyo Afqaanistaan ayaa noqday meelaha ugu halista badan caalamka, sida lagu sheegay daraasad cusub oo khariidad loogu sameynayay dadka dunida u socdaala.
War bixintan oo ay si wada jir ah u soo saareen hay’adda caalamiga ah ee caafimaadka iyo nabad galyada ee SOS iyo hay’adda la socodka khataraha adduunka ayaa musaafuriinta loogu sheegayay xaaladaha ka jira meelaha ay safarrada ku tagayaan sannadka foodda nagu soo haya ee 2019-ka.
Waa sidee xaaladda amniga badaha Soomaaliya
Dalalka Africa ee sida gaarka ah ay caafimaad darradoodu aad ugu sarreyso ayaa lagu sheegay iney yihiin Suudaanta Koonfureed, Niger, Ivory Coast iyo Sierra Leone.
Dalalka kale ee caafimaad darradooda laga deyriyay ayaa waxaa ka mid ah Ciraaq, Lubnaan, Venezuela iyo Kurriyada Waqooyi.
Dhanka kale waddamada ay xaaladdooda caafimaad aadka u wanaagsantahay ayaa lagu sheegay iney kala yihiin kuwa qaaradda Yurub iyo waddamada kale ee kala ah Canada, Mareykanka, New Zealand iyo Japan.
Dalalka Brazil, Shiinaha iyo ruushka ayaa loo tix galiyay in khatartooda caafimaad ay sii kordheyso.
Marki la eego dhinaca amniga, waddamada ay khatarta xad dhaafka ah ka jirto ayaa lagu tilmaamay iney yihiin Afqaanistaan, Suuriya, Yemen, Liibiya, Soomaaliya Suudaanta Koonfureed iyo Mali, kuwaasoo usii kala halis badan sida ay u kala horreeyaan.
Meelaha ugu caansan ee dalxiiska loo tago sida Mexico, qaar ka mid ah dalalka la isku yiraahdo Caribbean-ka iyo qeybo ka mid ah Hindiya ayaa lagu tilmaamay iney khatarta ku badantahay.
Hase ahaatee meelaha uu amnigooda aad u wanaagsanyahay ayaa lagu sheegay dalalka Denmark, Switzerland, Slovenia, Iceland, Greenland iyo Finland.
Inta badan dalalka Yurub ayaa lagu qeexay iney aad ugu yartahay khatarta dhinaca waddooyinka waxaana la mid ah waddamada Japan, Australia iyo Zew Zealand